Boeny: manomboka ny 20 mai 2017 ny taom-piotazana Lojy | Région Boeny
Misokatra amin’ny fomba ofisialy ny sabotsy 20 mai 2017 ny taom-piotazana Lojy na Black eyes eto amin’ny faritra Boeny araka ny fampahafantarana nataon’ny Lehiben’ny faritra, ny zoma 19 aprily 2017 tao amin’ny biraony, ao amin’ny Bloc Administratif Ampisikina.
Ny Marchés Contrôlés, izay vao napetraka na ny Tsena voahara-maso manomboka eto no mifehy ny fivezivezen’ity vokatra sangany eto Boeny ity. Manomboka any amin’ny mpamokatra hatrany anaty sambo.
Arahi-maso araka izany manomboka eto ny atao hoe “traçabilité”: ny kalitaon’ireo vokatra miakatra, ny lanjany, ny fandoavan’ireo mpitatitra sy mpanangom-bokatra ireo karazana tamberim-bidy eny anivon’ny Kaomina, ary ny fahafenon’ny atontan-taratasy ara-dalàna ho an’ireo mpandondrana.
Anisany fepetra napetraka tamin’ity taom-pambolena 2017 ity ny fanaraha-maso manokana ny fampiasana ny fanafody famonoana biby kely amin’ny voly Lojy. Niteraka olana goavana izy io tamin’ny taon-dasa araka ny fanazavan’ny CR Boeny ihany, satria vokatra Lojy tamina kaontenera maromaro no naverin’ireo mpandray ny vokatra any avy any ivelany tao amin’ny seranan-tsambon’I Mahajanga.
Rehefa nataon’izy ireo mantsy ny fitsirihana ny vokatra tany amin’ny laboratoara tany an-dafy tany dia avo be tsy mifanaraka amin’ny vokatra BIO notakian’izy ireo ny fatran’ny fanafody famonoana biby kely nampiasain’ieo tantsaha taty an-toerana, ary mety hatohina ny fahasalaman’ireo mpanjifa any ivelany izany.
Anisany tadifiditra ao anatin’ny Marchés contrôlés araka izany ny fanaraha-maso ny famarotana ireny fanafody ireny. Fehezina ho eny amin’ny toerana nahazo alàlana manokana avy amin’ny Ministeran’ny Fambolena ihany no mahazo manao izany ankehitriny, raha teny amin’ny mpivaorta enta-madinika aza nahitana izany teo aloha. Tsy maintsy efa nahazo fiofanana ihany koa ireo mpivarotra tamin’ireo teknisiana ka afaka hanoro ireo fatra sy karazana tokony hampiasain’ny tantsaha arakarakin’ny karazana biby kely mihinana ny voly Lojy.
Noho ny seha-pihariana Lojy miaka-danja ka mitondra fandrosoana mivantana miainga any amin’ny tantsaha ary mipaka any amin’ny kitapom-bolan’ny Kaomina, Faritra ary ny Firenena mihitsy, ny fitondrana foibe dia nanome fahefana manokana ny Lehiben’ny faritra, tamin’ny alàlan’ny lalàna 2017-006 ny 03 janoary 2017, handrindra ny tsenam-pambolena eo anivon’ny faritra ka hiaro ity seha-pihariana ity sy hampiroborobo azy maharitra.
Ho fanatanterahana izay baiko izay, sy mba hiarovana ny antom-piveloman’ireo mpisehatra mivantana sy ankolaka eo amin’ny Seham-pihariana Lojy dia namoaka ny lalànam-paritra 007 tamin’ny 28 avrily 2017 mifehy ny fikirakirana ny Lojy ny teto amin’ny Faritra Boeny.
Voalaza ao anatin’io lalànam-paritra io avokoa ny tokony hatao sy ny voarara rehetra eo amin’ny dingana tsirairain’ny seha-pihariana miainga amin’ny mpamokatra, ny mpivarotra masomboly sy fanafody, ny mpanangom-bokatra, ny mpitatitra ary ny mpanondrana any ivelany.
Nanotrona ny lehiben’ny Faritra tamin’ny fanambarana ny fisokkan’ny taom-piotazana Lojy 2017 ny Talem-paritry ny Fambolena sy ny Fiompina, ny Varotra sy ny Fanjifana, ny Tale jeneralin’ny Tranoben’ny Varotra sy ny Indostria ary ny Mpandrindram-paritry ny Prosperer Boeny.